အောင်ဇော်| February 16, 2013 | Hits:26,402
| | ဦးတေဇလိုပဲ ဦးဇော်ဇော် အနေနဲ့လည်း နိုဘယ်ဆုရှင်ကို တွေ့ဖို့အခွင့်အရေး အချိန် သိပ်ကုန် မခံ (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
တတိယတန်းစား ဒီမိုကရေစီဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံများရှိ ပြင်ညီတာဝန်ခံမူ (၂)စကော့တလန်က သင်ခန်းစာအမျိုးသမီးများအပေါ် ကျောင်းများက ခွဲခြားကန့်သတ်နေမှုများ ရပ်သင့်ပြီစစ် အာဏာသိမ်း ၂၆ နှစ်အလွန် အိမ်ပြန်လမ်း
34 Responses LeaveaReply Cancel reply
soe min February 17, 2013 - 7:04 am ဒီခရိုနီကိစ္စက ရင်းလို့မပြီးနိုင်ဘူးပဲနော်။
Reply ml February 19, 2013 - 3:57 am ဟုတ်ပါတယ်။ ဘာပဲ ပြောပြော သူတို့က ပြန်လှုသေးတယ်။ ပြည်သူအတွက် ဆေးရုံ၊ ကျောင်း ဆောက်ပေးတယ်။ တချို့ တပြားတောင် ပြန်မလှုသူတွေ အများကြီး။ နောက်ပြီး ခရိုနီတွေက ချမ်းသာတာ ၁ % ပြန်လှုတယ် ပြောကြတယ်။ ကိုယ်တွေကရော ကိုယ့်ဝင်ငွေရဲ့ ၁% လှုဖြစ်လား။ ရန်သူဘက်ကနေ ကိုယ့်ဘက် ပြောင်းလာတာ မကြိုဆိုရင် သူတို့ ဘယ် လာတော့မလဲ။ ကိုယ်ပဲ ရန်သူများမှာပေါ့။
Reply K Z Y Htun February 17, 2013 - 8:21 am Handle with care. They are not stupid, but poisons for the country.
Reply mm February 17, 2013 - 10:08 am လွယ် ပါ တယ် အရင် က တိတ် တိတ် ကူ ညီနေ တဲ့ သူ တွေ က ပို ပြီး ကူ လိုက် ပေါ့
Reply minko February 17, 2013 - 11:06 am ထောင်မြင်လို့ရာစွန့် တာ ဒါန မစစ်ဘူးလို့ တော့ ဘုရားဟောကျမ်းဂန်တွေမှာပါတယ်။
Reply Margathagyar February 17, 2013 - 2:01 pm Crony destroy public plight.
Reply true talker February 17, 2013 - 5:50 pm It should be compulsory to inquire details for old and new ,every cronies,that becomes multi rich,because,they got the very special rights,from the Junta Regime. I think 95% of the cronies,are,avoid to pay tax,and many crooked ways, they have used. Because of the Donation,any body should not makes easy forgiveness,friendly and good relation to them.
Reply လူလေး February 17, 2013 - 6:45 pm သူတို့ လှူတာ ဒေါ်လာ ၅သိန်းထဲပါ တေဇဝင်တာ တနှစ် ယူအက်စ် သန်း၅၀၀ ဇော်ဇော် ဝင်တာ သန်း၅၀၀ သူတို့ ၂နှစ်စာလောက် လှူပေါ့ တကယ်စေတနာပါရင်။ အဲလောက်လှူရင် ခရိုနီတွေ ပုံရိပ်ကောင်းလာလိမ့်မယ်။၂၄နှစ်လောက် ပြည်သူအတွက်ရပ်တည်လာတာ ပြည်သူတွေလယ် မတရားသိမ်း တဲ့ အချိန် ခရိုနီကိုကာကွယ်နေတာ ကတော့ သဘာဝမကျဘူးထင်ပါတယ်။ တွေးတတ်သူတိုင်း နာလည်မှာပါ။
Reply ဖေါ်မြူလာ February 17, 2013 - 6:50 pm ခရိုနီ+NLD = 2015 အာဏာရှင်
Reply Ko Khine February 17, 2013 - 7:55 pm ကျွန်အမြင်မှာတော့ ခရိုနီ တွေ လည်း တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေလို့ ပဲ မြင်စေချင်တယ် ။ န၀တ ၊နအဖ ခေတ်မှာ အခုလို ခရိုနီတွေပဲ ပြောပြော ဘာပဲပြောပြော ကိုတေဇ အပါ ဦးဇော်ဇော် ၊ ဦ ဌေးမြင့် ( ယုဇန ) တို့လို စီးပွါးရေး လုပ် တတ် တဲ့ လူတချို့ ကြောင်း တို့ဗမာလူမျိုးတွေ က ခေါင်းမော့ပြီး လမ်းလျောက်ရဲ တဲ့အဆင့်ရောက်သွား တာပါ ။ သူတို့ သာမရှိရင် လူမျိုးခြားတွေ မော့ကြည့်ရတဲ့ အခြေအနေရောက် သွားမည် ။ ဒါပေမဲ့ ယခု စစ်တပ်ကြီးဆိုးသည့်စနစ်ကြီး မရှိတော့တဲ့နောက် ၊ သူတို့လည်း အများနည်းသူ ရိုးရိူးသားသားနဲ့စီးပွါးရှာဖို့ လိုလာပြီ လို့ ထင် တယ် ။ ဟုတ်တာ မဟုတ်တာတော မသိဘူး ၊ ဟိုတလောက ဦးဇော်ဇော် ပြောသွားတယ်ဆိုပြီး သတင်းတခု ရှိတယ် ၊ အဲတာက ဦးဇော်ဇော် သေဆုံးတဲ့နောက် သူ့ ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှူ အားလုံး လှူဒါန်းသွားမည်ဆိုတဲ့သတင်းပါ ။ အမှန်တကယ် သူကိုယ်တိုင် ဒီလို ပြောပြတယ်ဆိုရင် အတုယူရမည့် လူ တ ယောက်လို့ သတ်မှတ်ရမည်။
Reply မိုးမြင့်ကျော် February 18, 2013 - 4:45 pm အတော်အမြင်ကျယ်၊ အတော်သိ တာပဲ။
Reply Nyein February 17, 2013 - 8:07 pm “ခရိုနီလို့ သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့သူတွေက NLD ရဲ့ လူမှုရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဖို့ အတွက် ထောက်ပံတယ် ဆိုတာ ဘာ မှားလို့လဲ။ အဓိပ္ပာယ်မဲ့ နေရာတွေမှာ သုံးဖြုန်းပစ်တာနဲ့ စာရင် သူတို့ ဒီလို ရည်ရွယ်ချက် ကောင်းကောင်းနဲ့ လုပ်ဆောင်တာဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်ရပ်ပါ”
Reply khinmglwin February 17, 2013 - 8:27 pm အကောင်းမြင်ကြည့်ကြယင် ကောင်းမယ်
Reply bingo February 17, 2013 - 9:13 pm u zaw zaw whoever what they said, keep doing contribution for our people and country:::
Reply zaw February 17, 2013 - 10:51 pm BELIEVE IT. AMAY SUU CAN SAVE OUR COUNTRY MYANMAR ONLY NO OTHER.
Reply Shwe Yoe February 18, 2013 - 12:36 am They may be clever cronies. We will never know what they said to the generals but we clearly see now that they are trying to switch side. I hope they will not keep our Lady in their purses.
Reply Hnin Hnin February 18, 2013 - 11:35 am ခရိုနီတွေကနလန်ထလာစရာအကြောင်ကိုမရှိပါဘူး။
Reply Salai Lian February 18, 2013 - 1:26 pm I agree. Recovery from what? They are alive and well, and keep sucking more blood. They are very good in playing dirty games. They just try to influence both sides, junta and NLD.
Reply jealousacker February 20, 2013 - 4:58 pm No problem at all.They are burmese.
Reply လူလေး February 18, 2013 - 2:19 pm most daw suu followers and thein sein group or his party supporters are brain dead & blind supporters. we can criticize when we see wrong. cronies duty money are lass thanasport car. if they donate 500m. i would believe they are changing. now they just give u guysabone , notapeace of meat. u guy have to know that. u guy r barking forabone. my comment may be deleted by admin but it is ok. love your own mother first then talk about politic.
Reply မြန်မာပြည်သား February 18, 2013 - 3:11 pm အရင်ကတော့ လူကြီးနာမည်နှင့် အထက်ဖား အောက်ဖိလုပ်ပြီး တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာတွေကို တန်ကြေးထက် အများကြီးနည်းတဲ့ ဈေးနှင့် ရိုက်ထုတ်သွားတာတို့…..
Reply မိုးမြင့်ကျော် February 18, 2013 - 5:04 pm စစ်အစိုးရ အသက်ဆက်ရေး အများဆုံးကြိုးစားပေးခဲ့တာ ခရိုနီတွေ ပါ။
Reply khin February 18, 2013 - 5:26 pm If cronies do the right thing, we shoud support their action. Now they contribute some money for educaion, we should appreciate what they have done people.
Reply kyaw tun February 19, 2013 - 8:08 am so hurt .. why amay Su pretend or she actually dont know anything about the play game of junta and crony ??? is itatrue leader who dont know anything about the tactics of politics ??? Burma is Hopeless …. Junta just change just for getting the powe for them Reply BuPyawThu February 20, 2013 - 5:05 pm Hurt?Becareful naw.
Reply zaw February 19, 2013 - 10:27 am In Democracy system, economic is depending on thinking and calculation. Some people do one
Reply yangonthar February 19, 2013 - 1:52 pm တကယ်တန်းအားမနာပဲပြောရမယ်ဆိုရင် ၊ မြန်မာနိင်ငံကေ၇းသားခေါ်ဝေါ် နေကြတဲ. ၊လုပ်ငန်းရှင်စီးပွားရေးသမားကြီးတွေဆိုတာတွေဟာ ၊ တခြားနိင်ငံတွေက သူဌေးသူကြွှယ်တွေလို အဆင်.မမှီပါဘူး ၊ သူတို.ရဲ.လည်ပတ်နေတဲ.လုပ်ငန်းတွေနဲ. ၊ ရယူပိုင်ဆိုင်ထားတာတွေဟာ ၊ တ၇ားဝင် တွေမဟုတ်သလို ၊ အပတ်တကုတ် ကြိုးစား ခဲ.ရတာလဲမဟုတ်ပါဘူး ၊ ဥပမာပေးရရင် ဈေးသည်တော. ဈေးသည် ပဲ ၊ လမ်းဘေးဈေးသည်နဲ. ဆိုင်ကနားနဲ.ေ၇ာင်းတဲ.ဈေးသည်လိုပဲ ၊ဈေးရောင်စားတာချင်းတူပေမယ်. ၊ အဆင်.အတန်းနဲ.အတွေးအခေါ်တွေမတူကြပါဘူး။ အဲဒီတော. မျိုးဆက်သစ် တရားဝင် အဆင်.အတန်းမှီတဲ. လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပဲ မျော်လင်.ရမှာပါ။
Reply Win Myint February 19, 2013 - 4:00 pm ခရိုနီတွေ အားလုံးထဲမှာမှ ရွှေသံလွင် ဦးကျော်ဝင်းဟာ သမ္မတရုံးနဲ့ အလွန်ကို နီးစပ်သူ ဖြစ်သ်လို သမ္မတအိမ်တော်နှင့် လည်း အင်မတန်မှ အလွမ်းသင့်သူဖြစ်ပါတယ်၊ ခု NLD နှင့် လဲ အရမ်းကိုချစ်ခင်နေပါပြီ။ သတိထားရ မဲ့ ခရိုနီကြီးတစ်ယောက်ပါ။
Reply Bamar February 20, 2013 - 3:57 pm burmese are low level.Jealous.How about your guys?You guys haveamirror at home?You all are same.dont be jealous.Do you know why they became Rich?Because,they never wasted their times for writing comments in here.hehe.South kyint twae pyin kya tot.Welcome U Tay Za and U Zaw Zaw and others rich peoples.help poor people and help myanmar.Forget about jealous guys.We need ur help.Thank you.
Reply thanwin February 22, 2013 - 4:37 pm စီးပွါးရေးသမားများ က သူ့ စီးပွါးရေး အတွက် ပဲ လုပ်သွားမှာပါ ၊ သူတို့ ရဲ့ အရှင်သခင်က ငွေပါ။ သူတို့ အခင်တွယ်ဆုံးကလဲငွေပါ။
Reply မင်းကြီးညို February 23, 2013 - 6:30 pm လောကကြီးမှာ ပိုက်ဆံကိုသာ ပုံအောပြီးအလှူငွေတွေထည့်လိုက်ရင် မကောင်းတဲ့လူက လူ
Reply soeoo February 27, 2013 - 6:39 pm ပြုပြင်ပြောင်းလဲမူတွေလူပ်နေတယ်လိုပြောတာပဲ အောက်ခြေ၀န်ထမ်းတွေက အခုအချှိန်ထိတော့ မပြောင်းလဲကြသေးဘူး ဒါ ဖြစ်လိုလည်း လူကြီးတွေရဲစကားကိုနားမတောင်တာလား အောက်ခြေ၀န်းထမ်တွေနဲ့ လူကြီးတွေကဘယ်သူပိုကြီးလဲလိုမေးကြည့်ချှင်းတယ်
Reply soeoo February 27, 2013 - 6:54 pm တစ်တယ်တော့လူဆိုတာမှားတတ်ပါတယ် အများကိုသိပြီးအမှန်ကိုလျှောက်တတ်မှကောင်းမယ်ထင်တယ်ခ၇ိုနီကြီးတွေနောင်တ တ၇ားတွေ၇ကြဖို့လိုတယ် နောင်ဘ၀တစ်လုံ့းစားမကုန်ဖြစ်နေ တဲ့ငွေတွေကို အမျှားပြည်သူအတွက်လူုရင်ပိုကောင်းမယ် လူဘ၀ဆိုတာခဏလေးပါ ဘာမှမြဲတာမ၇ှိဘူး ကိုယ်၇ဲသမိုင်းကသာမြဲကျှန်ရစ်မှာပါ။ ဆက်ပြီးတော့သာကူမလုပ်ပါနဲ့တော့ ဆင်း၇ဲတဲ့ပြည်သူတွေကိုကြည့်ပါတော့။
Reply thettheteinaing April 19, 2013 - 11:45 pm အားလုံးလည်းသိပါတယ် မပြောပါလိုပါဘူး ပေါင်းစားတာတော့ကောင်းတာပေါ့ အရိုး